5 Superstars WWE nanambady izay nifanerasera tamina kintana iray hafa - Wwe
5 Superstars WWE nanambady izay nifanerasera tamina kintana iray hafa
WWE dia niroborobo tamin'ny fialamboly ara-panatanjahantena noho ny fahaizany milaza tantara ny tonga lafatra ary nahatonga ireo mpankafy variana tao ka tsy afaka nanavaka ny tantara an-tsehatra sy ny zava-misy amin'ny fotoana sasany.
Nandritra ny am-polotaona maro lasa izay, nahita WWE nanakarama mpitantana sy valet ho Superstars lehibe indrindra izy ary maro ny lafiny toy izany no nanjary fifandraisana eo amin'ny sehatra ihany koa.
Betsaka ny fifandraisana toy izany no niraraka tamin'ny lampihazo koa niaraka tamin'ny Superstars izay raiki-pitia sy nanambady. Indraindray WWE dia nanoratra ny Superstars nanambady mba hanao fifandraisana an-tserasera amin'ny olon-kafa.
zavatra manaitaitra hatao rehefa mankaleo
Na dia nahita tantara maro mifandraika amin'ny WWE Superstars aza izahay, mahaliana fa olona maromaro no nandray anjara tamin'ny zoro niaraka tamin'ny WWE Superstars hafa raha nanambady olon-kafa tao anatin'ny orinasa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ireo Superstars 5 WWE izay nanana fifandraisana an-tserasera tamina kintana hafa ankoatry ny vadiny.
# 5 Volon'ondry
Rusev dia nanana fotoan-tsarotra tamin'ny fifampiraharahana tamin'ny tantara nifandray tamin'ny vadiny tany WWE
Lana dia iray amin'ireo olona fanta-daza indrindra amin'ny WWE ankehitriny noho ny gimikika nomen'ny orinasa azy sy ny anjara asany amin'ny RAW.
Tonga tany WWE ho mpitantana ny The Bulgarian Brute, Rusev, Lana dia nahavita nanao anarana ho an'ny tenany.
Nandritra ny taona maro dia hitantsika i Lana nirotsaka an-tsehatra amin'ny tantaram-pitiavana maro miaraka amin'ny Superstars ao anatin'izany Rusev, Dolph Ziggler, ary Bobby Lashley. WWE dia nisintona azy avy teo amin'ny peratra tato ho ato ary nampiasa azy tamin'ny andraikitra fitantanana sy ny lafiny fifandraisana mihoatra ny zava-drehetra.
Raha niditra an-tsehatra tamin'ny fifandraisana amina làlana niaraka tamin'i Dolph Ziggler sy Summer Rae ry Rusev sy Lana dia nifampiraharaha tamina fiainana tena izy tamin'ny faramparan'ny taona 2015.
Na dia nivady tamin'ny fiainana tena izy roa aza, dia nanandrana nampiasa io zoro io tamin'ny fomba feno i WWE ary nanandrana nampirehitra ny fihenjanana teo amin'ny mpivady. Ny Rock dia toa nanondro ny fifandraisana taloha tamin'i Lana tao amin'ny sehatra iray mampihomehy any ambadiky ny sehatra ary ny Aiden English izay manandrana mitondra vava eo anelanelan'ny mpivady no ohatra sasany amin'izany.
ny fomba hialana amin'ny lainga amin'ny fifandraisana
WWE dia nanana zoro lehibe teo anelanelan'ny Lana sy Lashley
Na izany aza, ny zoro tantaram-pitiavana lehibe indrindra nahitana an'i Lana hatramin'ny nanambadiany an'i Rusev dia nahita azy hanana fifandraisana an-tserasera miaraka amin'i Bobby Lashley. Samy nanambady teo afovoan'ny peratra i Superstars roa taorian'ny nisarahan'i Lana 'Rusev.
Lana dia mijanona ho iray amin'ireo mpilalao lehibe indrindra amin'ny RAW izay nahita zoro fifandraisana maro na dia nanambady an'i WWE Superstar teo aloha aza izy izay navotsotra tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
ahoana no ilazana raha tia anao ny tovovavy
inona no ataon'i zoe mclellan izao
maninona ry zalahy no misintona ary miverina
tokony hilaza amin'ny olona tiako ve aho?
inona ny famaritana ny fifandraisana vita
tononkalo mitantara ny fiainana